भरतपुरमा अहिलेसम्म संक्रमित व्यक्ति भेटिएका छैनन्ः रेनु दाहाल | Ratopati
‘छिमेकी देशबाट पनि उपचार गर्न आएका छन्’
कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम नियन्त्रणका लागि ७२ घण्टामा भरतपुर महानगपालिकाकी मेयर रेनु दाहालको पहलमा भरतपुरमा अस्थायी अस्पताल निर्माण भएको छ । अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि एक सय भन्दा बढीले सेवा लिइसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
आइसियु, एचडीयु र जनरल वार्डसहित ७० शैयाको अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा आएपछिको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? कसरी सञ्चालनमा आएको छ ? कति जना संक्रमित भेटिए ? जस्ता विषयमा केन्द्रीत रहेर भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशंः
अस्पतालको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
छोटो समयमा सञ्चालनमा ल्याएर राम्रो सेवा दिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने एउटा त्रास हामीलाई नि थियो । तर, सोचेको भन्दा राम्रो तरिकाले अस्पतालले सेवा दिँदै आएको छ । सबै दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामी सफल छौं ।
कहाँ कहाँबाट उपचारको लागि आएका छन् ?
चितवन मेडिकल सिटीको रुपमा छ । अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति पनि छन् । देशैभरीबाट यहाँ उपचार गर्न आउँछन् । छिमेकी देशहरुबाट पनिआएका छन् ।
अस्पताल बनाउने सोच कहाँबाट आयो ?
भयावह अवस्थाको रुपमा फैलिएको कोरोना रोगले सबैलाई त्रसित बनाइरहेको अवस्थामा पूर्व तयारीको लागि हामीसँग पर्याप्त समय थियो । यो समय भएको बेला यसलाई सही ढंगले सदुपयोग गरौं र पूर्वतयारी अवस्थामा रहौं भन्ने हिसाबले जुट्यौं ।
सरोकारवाला पक्ष सबैको साथ पनि पायौं । सबैले सहयोग गर्नुभयो । डाक्टर साब, विषयविज्ञको साथ र सहयोगबाट पूर्वतयारीको लागि जुट्यौं । अनि मात्रै अस्पताल बनाउन सम्भव भयो ।
पूर्वतयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन भनेर हामी जुट्यौं, छलफल गर्यौं । यहाँ थुप्रै सरकारी, नीजि, केन्द्रीय अस्पतालहरु छन् । क्यान्सर अस्पताल छ । मेडिकल कलेजहरु पनि छ । तर, यो संकटको घडीमा त्यस्ता खालका बिरामीहरुलाई उपचार गर्ने क्विक खालको एउटा रेस्पोन्स गर्ने अस्पतालको आवश्यकता थियो । अन्य सम्बन्धित हस्पिटलहरु पनि डराउने मिक्समाक्स भएको अवस्थामा छुट्टै खालको विशिष्टकृत बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
कोरोना डेटिकेटेट अस्पतालको रुपमा जति पनि कोरोनासँथ सम्बन्धित शंका लागेकाहरुलाई छुट्टै खालको सेवा दिनपर्छ भनेर यो पर्याप्त हामीसँग हल पनि थियो । त्यसैले सञ्चालनमा ल्याएका हौं ।
चीनमा यो रोग निम्तिँदै गर्दाखेरी अरु देशले छिट्टै आफ्नो देशमा आउला भनेर कसैले सोचेको थिएन । उनीहरुलाई त्यो महसुस पनि भएन । हाम्रो देशमा पनि आउन सक्छ भनेर पूर्वतयारी रहने अवस्था भएन । जस्तो युरोपियन देशहरु तिव्र रुपले जुन संक्रमण फैलिएको छ यति नभएर शक्तिशाली राष्टहरुमा पनि फैलिएको छ ।
त्यहाँका राज्यको विशिष्ट ओहोदाका व्यक्तिहरुमा पनि यो संक्रमण फैलिएको छ । राजकुमार, मेयरदेखि लिएर डाक्टरहरु थुप्रैलाई संक्रमण फैलिएको अवस्था छ । तर, चितवनमा हालसम्म संक्रमित बिरामी भेटिएको पनि छैन ।
नभेटियोस् भन्न चाहन्छु । यदि त्यस्तो शंका लागेको पाइएमा अस्पताल ल्याउन सबैले मद्दत पनि गर्नुभएको छ । सबै ठाउँबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छु ।
अहिलेसम्म कति जनाले सेवा लिए ?
१११ जनाले सेवा लिनुभएको छ ।अहिलेसम्म संक्रमित कसैमा देखिएको छैन । अहिले ११ जना अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । भर्ना गरेकोमध्ये ८ जनाको टेस्ट गइसकेको छ टेकु अस्पतालमा । त्यसमा २ जनाको नेगेटिभ रिजल्ट आइसकेको छ । ६ जनाको आउन बाँकी छ । त्यसपछि आज थप ७ जनको परीक्षण पठाइन्छ ।
पब्लिकको गुनासो छ भन्ने आरोप लागेको हो?
कतार जापान जस्ता संक्रमित देशबाट आएका मान्छेहरुलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्नु चेकजाँच गर्नु नराम्रो हो र ?चितवन जिल्लाका ६ जना कतार एयरवेजबाट नेपाल आएको भनेपछि उनीहरुको खोजी गर्नु प्रशासनको कर्तव्य हो । १४ दिनसम्म उनीहरुलाई छुट्टै ढंगले राख्न पर्यो । अर्को कुरा त्यस्तो केही रोग छ भने (जस्तै रुघाखोकी, ज्वरो) आएको छ भने तिनीहरुलाई यहाँ राखेर स्वायब लिएर परीक्षणको लागि पठाउन त पर्यो । त्यो हिसाबले मात्र हो । विदेशबाट आउनेहरुलाई आफ्नो घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध पनि गरेका छौं ।
अस्पतालमा कतिवटा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध छ ?
स्ट्यान्डबाई २ वटा छ । आवश्यकता परेको खण्डमा अरु उपलब्ध गराउँछौ । बाहिर बाहिर चाहिँ थुप्रै छ ।
डाक्टरहरु कति जना छन् ?
लगभग १०० जना हुनुहुन्छ । आलोपालो गरेर सेवा दिइराख्नुभएको छ । डाक्टर मात्र नभई अरु कर्मचारीहरु पनि हुनुहुन्छ । २४ सै घण्टा उनीहरुले सेवा दिइराख्नु भएको छ ।
१ण् जना डाक्टरहरुलाई निशुल्क फाने गरेर घरमै बसेर थप बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ । जति बेला शंका लाग्छ त्यतिबेला फोन गरेर सोध्नसक्नुहुन्छ ।
९८५५०१९१६०, ९८५५०१९१६१, ९८५५०१९१६२, ९८५५०१९१६३, ९८५५०१९१६४, ९८५५०१९१६५, ९८५५०१९१६६, ९८५५०१९१६७, ९८५५०१९१६८, ९८५५०१९१६९, ९८५५०१९१७०, ९८५५०१९१७१ र ९८५५०१९१७२ हो टोल फ्रि नम्बर ।
यस्ते चितवन जिल्लामा फिबर क्लिनिक पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । वडाका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरुमा पनि सञ्चालनमा छ । त्यस्तो खालका बिरामी देखियो भने सम्बन्धित वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा पनि चेकजाँच हुने गर्छ ।
शकास्पद हो,होइन त्यहाँबाट पनि भेरिफाई हुन्छ । त्यहाँबाट भेरिफाइ भएपछि उहाँहरुलाई शंका लाग्यो भने यहाँ पठाउनुहुन्छ । विभिन्न अस्पतालहरुमा पनि फिबर क्लिनिक सञ्चालनमा छ । भरतपुर महानगरभित्र रहेका सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा पनि फिबर क्लिनिक अनिवार्य राख्नपर्ने हुन्छ ।
लकडाउनको अवस्था कस्तो छ ?
लकडाउन एकदम व्यवस्थित ढंगले छ । अलिकति बेलुकाको समयमा अघिपछि नेपाल बन्द जस्तो ठानेर ५ बजेसम्म कुरेर बस्ने ५ बजेपछि चाहिँ घर बाहिर निस्किने खालको छ भन्ने सूचना पाएको छु । त्यो पनि आजदेखि कन्टोलमा ल्याउँदैछौं ।
यो अस्पतालबाट अरु कुन कुन सेवा छ ?
यहाँबाट ओपिडी सेवा हुन्छ । पहिलो चेकजाँच हुन्छ । त्यसपछि आइसुलेसन हुन्छ । त्यसपछि एचडीओ र आइसीयू जस्ता सेवाहरु पनि सञ्चालनमा छ ।महानगरपालिकास्थित होटल संघले होटल क्वारेन्टाइन भनेर त्यसको एउटा कार्यदल पनि बनाइएको छ वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, होटल व्यवासयी संघ र यहाँका सरोकारवाला पक्षहरु कार्यदलमा छन् ।
गठन गरिएको कार्यदलको काम क्वारेन्टाइन बनाउन मिल्ने ठाउँ खोजी गर्ने, ठाउँहरु पहिचान गर्ने र छनोट गर्नेजस्ता हो । १० नम्बर वडाका अध्यक्ष तथा महानगरका प्रवक्ता अरुणपुडित भण्डारीको संयोजकत्वा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।